Akụkọ - Dịkwuo ugboro nyocha nke ndị ọrụ metụtara oyi na-atụbata
On December 9, Zhejiang ẹkenịmde 58th ọhụrụ okpueze ka oyi baa ka ọrịa oria na ịchịkwa ọrụ pịa ogbako. Ndị dị mkpa na-ahụ maka Officelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mgbochi na Nchịkwa nke vingbè na Marketlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahịa nke introducedgbè gosipụtara ọnọdụ nke ịhazi na ịkwalite ntiwapụ ọrịa na nchịkwa na mmepe akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Onye nta akụkọ ahụ mụtara site na nnọkọ ogbako ahụ na, iji gbochie nke ọma ihe egwu zoro ezo nke "nnweta anụ ahụ site na mmadụ gaa na mmadụ", Zhejiang ga-enyocha nyocha, ibudata na ibudata, njem, nchekwa, ịhazi, na ire ahịa nke ihe oriri oyi. , ngwongwo ndị ọzọ ebubatara, akpa ndị njem na-abata na ihe ndị ọzọ. Dị ka ndị isi ọrụ mgbochi na nchịkwa ọrịa, ndị ọrụ na-ebudata na ibudata na njikọ ndị ọzọ na-emejuputa ihe nchebe chọrọ, na-aga n'ihu na-eme nlekota ahụike kwa ụbọchị, ma na-abawanye ugboro ugboro nyocha nke acid. N'otu oge ahụ, wusie ike nyocha nke nucleic acid nke isiokwu ntinye na ndị ọkachamara metụtara ya.Onu ogugu nke ihe omumu ihe nlere, ihe omuma nke ihe omuma, na ihe nlere gburugburu nke anwale na mpaghara obula (obodo, district) kwa izu agagh adi ihe ruru 30.
Nzukọ ogbako ahụ mere ka amara banyere njikwa dị mkpa nke acidic acid na-adịbeghị anya na-ebubata nri oyi:
Na 21: 00 na mgbede nke Disemba 2, ihe nlele kwa ụbọchị nke ihe oriri na-ekpo ọkụ nke Yuhuan Center for Control and Prevention chịkọtara na Chengguan Central Vegetable Market chọtara ụdị azụ ụkwụ ụkwụ oyi kpọnwụrụ si Brazil nke nwalere nke ọma maka coronavirus ọhụrụ acid. Mgbe esiri usoro "Zhejiang Cold Chain" lelee ya, ngwaahịa ndị ahụ batara na mba ahụ site na Shanghai Yangshan Port na Septemba 28. Mpaghara mpaghara ahụ nakweere usoro mberede ngwa ngwa dịka nchekwa nchekwa, nyocha ndị ọrụ na iche, na mkpochapu saịtị, wee mepụta ya. Nnyocha acidic na gburugburu ebe obibi na ndị ọrụ na-abụghị ahịa n'abali. The mkpa distrikti na ógbè nke Taizhou City abuana ke ngwaahịa mgbasa ozugbo rụrụ ibu na ndị ọrụ nsuso, nnyocha na mkpofu. Officelọ Ọrụ Mgbochi na Njikwa gosikwa mpaghara na obodo ndị agbata obi. Dabere na ọnụ ọgụgụ, Taizhou City chịkọtara ngụkọta nke 174 ihe atụ nke otu ụdị ngwaahịa ahụ, nkwakọ ngwaahịa mpụga, na mpụga mpụga metụtara, wee mata ndị 3304 metụtara. Nsonaazụ nucleic acid rụpụtara bụ ihe niile adịghị mma.
Ka ọnwa nke iri na ise dị na Disemba, Wuxi City, Jiangsu Province, gwara otu ụlọ ọrụ na ngwugwu dị n'èzí nke anụ ụlọ na-enweghị atụ na-echekwa echebara maka coronavirus ọhụrụ ahụ. Zhejiang haziri Hangzhou, Ningbo, Huzhou, Jiaxing, Shaoxing, Zhoushan, Taizhou na mpaghara asaa ndị ọzọ metụtara otu ngwaahịa ahụ iji mepụta nlele na nnwale mberede, ndị ọrụ nlekọta ahụike na disinfection, ma mechie ngwaahịa maka mkpofu na-adịghị njọ.N'ihe dị ka Disemba 8, 4,975 nke ngwaahịa na nkwakọ ngwaahịa metụtara, a na-enyocha ma na-anwale gburugburu ebe obibi na ndị na-eme ihe, na nsonaazụ nucleic acid bụ ihe niile adịghị mma.
Iji meziwanye usoro nchịkwa mechiri emechi nke nri oyi na-atụ, Zhejiang rụrụ ọrụ "zuru oke" na nri oyi na-atụbata nke na-abanye site na ọdụ ụgbọ mmiri Zhejiang ma ọ bụ na-asọba na Zhejiang site na ọdụ ụgbọ mmiri Zhejiang maka nchekwa, nhazi (ntinye ego), na ahịa. Ejikwa, enweghị ihe ọ bụla ”njikwa mechiri emechi, kwupụtara n'ụzọ doro anya" mmadụ anọ agaghị ", ya bụ:
A naghị ekwe ka ndị na-enweghị nyocha na akwụkwọ kwarantaini zụọ ahịa, a gaghị ekwe ka ndị na-enweghị akwụkwọ nyocha nke nucleic na-ere ahịa, ndị na-enweghị akwụkwọ disinfection anaghị ekwe ka ahịa, na ndị na-enweghị koodu nyocha nke usoro oyi. anaghị ekwe ka ere ahịa, na-ebelata ihe egwu nke mgbasa ọrịa nke ihe oriri na-eri oyi.
Tụkwasị na nke a, Zhejiang ga-emekwa ka mgbochi na njikwa nke okpueze ọhụrụ dị na ngwaahịa na ndị ọrụ metụtara ya sikwuo ike. Ikpe ikpe site na-adịbeghị anya anụ ụlọ ikpe, ke ala okpomọkụ gburugburu ebe obibi na oyi, ọhụrụ coronavirus nwere ike igbasa site na-abụghị oyi yinye yinjistik usoro, nke na-ewepụta ihe ọhụrụ chọrọ maka anụ ahụ agbachitere ọrụ. Na-elekwasị anya na n'ihu imeziwanye "isi iyi nnyocha na njikwa + ike isi iche + nkenke ọgụgụ isi akara" usoro, Zhejiang chepụta ụkpụrụ nduzi maka mgbochi na ịchịkwa ntinye isiokwu na yiri mkpara. N'ime ha, ngwongwo niile a na-ebubata site na ụgbọ elu ibu mba ụwa ma ọ bụ site na ọdụ ụgbọ mmiri na mba ahụ, belụsọ maka ụfọdụ ngwa ahịa buru ibu, na-akpachapụ anya ma bụrụ nke ebutere ngwa ngwa n'ụzọ njem na ngwugwu nke ngwaahịa a; a na-ebufe elu nke mpempe akwụkwọ nke ndị njem na-ebufe site na ọdụ ụgbọ elu na-ebufe n'ọdụ ụgbọ elu Na ụkpụrụ, achọrọ disinfection edo tupu amịpụta. Ọrụ disinfection na-agbaso ụkpụrụ nke nchekwa, ịdị irè, na ọrụ dị mma, nke ọ bụghị naanị na-ebelata ihe ize ndụ nke nje okpueze ọhụrụ a na-ebubata site na ngwongwo ndị a na-ebubata, kamakwa ọ na-ebelata njikọ njikọ na enweghị isi.
Dabere na onye dị mkpa nke na-elekọta Officelọ Ọrụ nke Mpaghara Ọchịchị Nchịkwa maka Mgbochi na Njikwa, Zhejiang enwebeghị akụkọ ikpe ọhụrụ gosipụtara na mpaghara 175 na-esote ụbọchị; enwere ugbua ikpe anọ ekwesiri ịgwọ ọrịa n'ụlọ ọgwụ, na ikpe 27 nke ọrịa asymptomatic ka nọ n'okpuru nchọpụta ahụike, ha niile si mba ofesi banye.
N'ihi ọnọdụ ikpe na-apụtaghị ìhè na Manzhouli City nke Mongolia dịpụrụ adịpụ nke mpaghara, Zhalai Nuoer District nke Hulunbuir City, Pidu District na Chenghua District nke Chengdu City nke Sichuan Province, dị ka ihe chọrọ nke usoro Zhejiang ziri ezi ziri ezi njikwa njikwa, ndị bụ nkewa ma ọ bụ ihe egwu dị egwu Ndị bịara Zhejiang wee laghachi Zhejiang site na mpaghara ahụ, ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịnye asambodo ule nucleic acid na-adịghị mma n'ime ụbọchị 7 tupu ha erute ebe ha na-aga, ma ọ bụ "koodu ahụike" akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Koodu nwere ozi a, a ga-eduzi ha gaa ebe a kara aka dịka ebe ọrụ ọrụ zuru oke maka nyocha nucleic acid; nsonaazụ ya bụ ihe na-adịghị mma Ọ nwere ike ịba ụba n'efu ma na-edozi ya n'okpuru atụmatụ nke mmụba okpomọkụ na nchebe onwe onye.
Na mgbakwunye, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ntiwapụ nke ọrịa na Kashgar, Xinjiang nọ na-achịkwa ya, na Zhejiang agbadatala n'ọnọdụ dị ala na mpaghara niile, anaghịzi achọ ndị ọrụ ịhapụ Kalai na Zhejiang ịlaghachi Zhejiang iji nye a na-adịghị mma nucleic acid ule akwụkwọ. Maka ndị na-alaghachi na Zhejiang site na Dongjiang Port District nke Tianjin City, Binhai New Area na Shanghai Pudong New Area, nke belatara na obere ihe egwu, a chọkwaghị akwụkwọ nyocha nke nucleic acid na-adịghị mma.
Kemgbe ntiwapụ nke ọrịa a, Zhejiang achọpụtala ndị na - arụ ọrụ ọfụma ọhụrụ na ụgbọ mmiri ndị ọzọ rụzigharịrị na Hong Kong. Stmepụta mgbochi ọrịa na mpaghara a bụ akụkụ dị mkpa nke ntinye nchekwa mba ọzọ. Dabere na ọnọdụ ndị dị adị, mpaghara ndị dị n'ụsọ mmiri dị mkpa echepụtala usoro nlekọta njikwa ụgbọ mmiri mba ofesi, yana nyocha zuru oke na mkpebi ikpe n'okporo ụzọ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, mgbanwe ndị ọrụ, wdg, yana njirimara ihe ize ndụ. N'ikwekọ na ihe achọrọ "nyocha zuru ezu, nyocha nke mbụ, nyocha nke mbụ, nyocha nke mbụ, na mmezi mbụ", a na-ekpuchi ule nucleic acid nke ndị ọrụ ahụ tupu ụgbọ mmiri mba ụwa abanye na ụlọ ọrụ nrụzi; A naghị ekwe ka mgbanwe ndị ọrụ rụọ ọrụ tupu ewepụta nsonaazụ ule ahụ, anaghị ekwe ka nrụzi rụọ ọrụ. N'otu oge ahụ, achọrọ ụlọ ọrụ na-arụzi ụgbọ mmiri ka ha guzobe usoro ndebanye aha na akụkọ mkpesa zuru oke, yana arụmọrụ mmezi nwere ike rụọ naanị mgbe egbuchara.
Post oge: Dec-09-2020